ဖလော်ရင်တီနိုပီရက်ဇ်ရဲ့ အတ္တ၊ မာနတွေကြားမှာ ရီးယဲလ်အသင်း ဓားစာခံဖြစ်တော့မှာလား
16 Jul 2018 . 5:46 PM
လက်ရှိအချိန်မှာ ဥရောပထိပ်သီးကလပ်အသင်းတွေအနေနဲ့ လာမယ့်ရာသီသစ်အတွက် ကစားသမားသစ်တွေ ခေါ်ယူပြီး ပြင်ဆင်မှုလုပ်နေချိန် ရီးယဲလ်အသင်းကတော့ ဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေနဲ့ ရာသီသစ်ကို စတင်မလဲဆိုတာကိုတောင် တိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။ အသင်းရဲ့အဓိက ဒေါက်တိုင်တွေဖြစ်တဲ့ နည်းပြဇီဒန်း Zidane ၊ စီရော်နယ်လ်ဒို C.Ronaldo တို့ ထွက်ခွာသွားချိန်မှာ ရီးယဲလ် လက်ရှိအနေအထားက တပ်ပျက်နေသလိုဖြစ်နေပြီး အသစ်က ပြန်စရမယ့်အနေထားဖြစ်နေပြီ။ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို (၃)နှစ်ဆက် ရယူထားတဲ့ အသင်း၊ လာလီဂါရဲ့အောင်မြင်မှုအများဆုံးအသင်း စတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တွေနဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ လာမယ့်ရာသီမှာ သူတို့ရဲ့အဓိက ပြိုင်ဘက် ဘာစီလိုနာကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ သံသယ မေးခွန်းတွေကလည်း ရီးယဲလ် ပရိသတ်တွေ ရင်ထင်မှာ ပဲ့တင်သံထပ်နေလောက်ပါပြီ။
တကယ်လို့ ရီးယဲလ်အသင်းသာ လာမယ့်ရာသီမှာ အောင်မြင်မှုမရခဲ့ရင် အဓိက လက်ညှိုးထိုးရမှာက ဥက္ကဌ ဖလော်ရင်တီနိုပီရက်ဇ် Florentino Perez ပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဇီဒန်း၊ စီရော်နယ်လ်ဒိုတို့ရဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းနဲ့လမ်းခွဲဇာတ်လမ်းမှာ ပီရက်ဇ်က အဓိကနေရာကနေ ပါဝင်ခဲ့လို့ပါ။
ဇီဒန်းနဲ့ပီရက်ဇ်တို့ရဲ့ အက်ကွဲကြောင်းက ကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့က စတာဖြစ်ပါတယ်။ ပီရက်ဇ်က မန်ယူဂိုးသမား ဒီဂီယာ De Gea ကို ခေါ်ယူလိုတယ်၊ ဇီဒန်းက လက်ရှိဂိုးသမားနာဗတ်စ် Navas ကို ယုံကြည်မှုရှိလို့ ဒီဂီယာမလိုဘူးဆိုပြီး ကန့်ကွက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ ပြဿနာစတော့တာပဲ။ ဇီဒန်းက ချယ်လ်ဆီးတောင်ပံကစားသမား ဟာဇက် Hazard ကို ခေါ်ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပေမယ့် ပီရက်ဇ်က သူသဘောကျတဲ့ ဒီဂီယာကို ခေါ်ယူဖို့ ဇီဒန်းကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက် တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ No လို့ ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ ဒီကိစ္စဟာ သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ တော်တော်လေး တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဇီဒန်းဟာ ၂၀၁၇-၁၈ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ရပြီးပြီးချင်း ရက်ပိုင်းအကြာမှာပဲ နည်းပြရာထူးက ရုတ်တရက်နုတ်ထွက်သွားခဲ့တာကြောင့် ရီးယဲလ်ပရိသတ်တွေကိုယ်တိုင် နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
ဇီဒန်းနဲ့ လမ်းခွဲပြီး (၂)လလောက်အကြာမှာပဲ စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းတို့ရဲ့ ကတ္တီပါလမ်းခွဲက စခဲ့ပြန်တယ်။ အမှန်တော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ အနာဂတ်သတင်းတွေက ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတည်းက ထွက်နေတာပါ။ ရီးယဲလ်ဟာ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ၂၀၂၁ အထိ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခဲ့ပေမယ့် စီရော်နယ်လ်ဒိုက နောက်ထပ် စာချုပ်သက်တမ်းတိုးလိုနေပြီး လစာလည်း ပိုလိုချင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သိတဲ့အတိုင်း ပီရက်ဇ်ဆိုတာက စီးပွားရေးသမားလေ။ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို သက်တမ်းတိုးမယ့်အစား လက်ရှိကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးနေရာကို တက်လှမ်းဖို့ခြေလှမ်းပြင်နေတဲ့ နေမာ၊ ဟာဇက်၊ ဘာပေတို့ထဲက တစ်ဦးကို ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင် စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့နေရာကို အစားထိုးနိုင်မှာဖြစ်သလို၊ ဈေးကွက်အရလည်း သိပ်ပြီးတော့ ထိခိုက်မယ့်အနေအထားမရှိဘူးလို့ တွက်ဆမိပုံပါပဲ။
နောက်ပြီး ပီရက်ဇ်က စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်မှ အသင်းနဲ့လမ်းခွဲမယ်လို့ ယူဆမိတာလည်း ပါပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုက အသင်းက ထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ချိန်မှာ အလွယ်တကူ ခွင့်ပြုခဲ့တာကတော့ ကစားသမားကို မလေးစားရာရောက်တယ်လို့ ထင်မိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုလို တစ်ရာသီကို အနည်းဆုံးဂိုး(၄၀)လောက်သွင်းတဲ့ကစားသမားမျိုး၊ ဈေးကွက်အရ တန်ဖိုးရှိနေဆဲကစားသမားမျိုး၊ ရီးယဲလ်အသင်းအတွက် မရှိမဖြစ်ကစားသမားမျိုးကို လွယ်လွယ်ကူကူ လက်လွှတ်ခဲ့တာက မှားယွင်းပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ အသက်(၃၃)နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဆိုတာတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ခြေစွမ်းက အကောင်းဆုံးအနေအထားမှာရှိနေဆဲပဲ။ ဒီလိုကစားသမားမျိုးကို ယူရိုသန်း(၁၀၀)လောက်နဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဆီ ထုတ်လိုက်တယ်၊ သူ့နေရာကို ဘယ်သူနဲ့ပြန်ဖြည့်မှာလဲဆိုတာ ပီရက်ဇ် အဖြေရှာမရသေးဘူး။
အခုအချိန်မှာ နေမာလိုလို၊ ဘာပေလိုလို၊ ဟာဇက်လိုလိုဖြစ်နေပေမယ့် ဘယ်သူ့မှ မသေချာသေးဘူး။ တကယ်လို့ အဲဒီ(၃)ဦးထဲက တစ်ဦးဦးကို ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ရင်လည်း စီရော်နယ်လ်ဒိုလို စွမ်းဆောင်ရည်မျိုး ပြသနိုင်မလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာပဲ။ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းအတွက်တော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ရလိုက်တာ ရွှေအိုးရလိုက်သလိုပါ။ အခု ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းရဲ့ ရှယ်ယာဈေးကွက်တွေ မြင့်တက်လာပြီ၊ စီရော်နယ်လ်ဒို အင်္ကျီတွေရောင်းချရမှုကလည်း မြင့်တက်နေပြီ။ ဒီအချိန်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ ရီးယဲလ်အသင်း အဲဒီ Effect တွေကို စတင်ခံစားနေရတယ်။
စပိန်သတင်းစာတွေရဲ့ဖော်ပြမှုအရ ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ ရှယ်ယာတွေက ကျဆင်းနေပြီလို့ သိရတယ်။ ဒါက ဈေးကွက်တစ်ခုတည်းပါ၊ ကွင်းတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်မှာလည်း အနည်းနဲ့အများထိခိုက်ဖို့ရှိလာနိုင်တယ်။ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ လာမယ့်ရာသီကို ဇီဒန်းမရှိ၊ စီရော်နယ်လ်ဒိုမရှိတဲ့ အခြေအနေနဲ့ စတင်ရမယ်၊ လက်ရှိခန့်ထားတဲ့ နည်းပြလိုပယ်တက်ဂီ ကရော ဇီဒန်းလိုမျိုး အောင်မြင်မှုတွေ ရယူနိုင်မလား၊ ဇီဒန်းတုန်းက အသင်းရဲ့ကံကြမ္မာကို အလောင်းစားလုပ်ခဲ့တဲ့ ပီရက်ဇ် ဒီတစ်ခါရော အဲဒီလို ကံကောင်းမှုမျိုး ထပ်ရဦးမလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ရှိရီးယဲလ်အသင်းရဲ့အနေအထားက အရင်တုန်းကလောက် အားရဖို့မကောင်းတော့တာ အမှန်ပါပဲ။ ပီရက်ဇ်ရဲ့ အတ္တမာနတွေကြားမှာ ရီးယဲလ်အသင်းက စတေးခံဖြစ်ရတော့မှာလား ဆိုတာတော့ . . . .
Photo:Extra.ie,Goal.com,FOX Sports Asia,Information Nigeria,Twitter
ဖလျောရငျတီနိုပီရကျဇျရဲ့ အတ်တ၊ မာနတှကွေားမှာ ရီးယဲလျအသငျး ဓားစာခံဖွဈတော့မှာလား
လကျရှိအခြိနျမှာ ဥရောပထိပျသီးကလပျအသငျးတှအေနနေဲ့ လာမယျ့ရာသီသဈအတှကျ ကစားသမားသဈတှေ ချေါယူပွီး ပွငျဆငျမှုလုပျနခြေိနျ ရီးယဲလျအသငျးကတော့ ဘယျလိုအစီအစဉျတှနေဲ့ ရာသီသဈကို စတငျမလဲဆိုတာကိုတောငျ တိတိကကြမြသိရသေးပါဘူး။ အသငျးရဲ့အဓိက ဒေါကျတိုငျတှဖွေဈတဲ့ နညျးပွဇီဒနျး Zidane ၊ စီရျောနယျလျဒို C.Ronaldo တို့ ထှကျခှာသှားခြိနျမှာ ရီးယဲလျ လကျရှိအနအေထားက တပျပကျြနသေလိုဖွဈနပွေီး အသဈက ပွနျစရမယျ့အနထေားဖွဈနပွေီ။ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို (၃)နှဈဆကျ ရယူထားတဲ့ အသငျး၊ လာလီဂါရဲ့အောငျမွငျမှုအမြားဆုံးအသငျး စတဲ့ဂုဏျပုဒျတှနေဲ့ ရီးယဲလျအသငျးဟာ လာမယျ့ရာသီမှာ သူတို့ရဲ့အဓိက ပွိုငျဘကျ ဘာစီလိုနာကို ကြျောဖွတျနိုငျပါ့မလားဆိုတဲ့ သံသယ မေးခှနျးတှကေလညျး ရီးယဲလျ ပရိသတျတှေ ရငျထငျမှာ ပဲ့တငျသံထပျနလေောကျပါပွီ။
တကယျလို့ ရီးယဲလျအသငျးသာ လာမယျ့ရာသီမှာ အောငျမွငျမှုမရခဲ့ရငျ အဓိက လကျညှိုးထိုးရမှာက ဥက်ကဌ ဖလျောရငျတီနိုပီရကျဇျ Florentino Perez ပါပဲ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ဇီဒနျး၊ စီရျောနယျလျဒိုတို့ရဲ့ ရီးယဲလျအသငျးနဲ့လမျးခှဲဇာတျလမျးမှာ ပီရကျဇျက အဓိကနရောကနေ ပါဝငျခဲ့လို့ပါ။
ဇီဒနျးနဲ့ပီရကျဇျတို့ရဲ့ အကျကှဲကွောငျးက ကစားသမားအပွောငျးအရှကေ့ စတာဖွဈပါတယျ။ ပီရကျဇျက မနျယူဂိုးသမား ဒီဂီယာ De Gea ကို ချေါယူလိုတယျ၊ ဇီဒနျးက လကျရှိဂိုးသမားနာဗတျဈ Navas ကို ယုံကွညျမှုရှိလို့ ဒီဂီယာမလိုဘူးဆိုပွီး ကနျ့ကှကျခဲ့တယျ။ အဲဒီမှာ ပွဿနာစတော့တာပဲ။ ဇီဒနျးက ခယျြလျဆီးတောငျပံကစားသမား ဟာဇကျ Hazard ကို ချေါဖို့ တောငျးဆိုခဲ့ပမေယျ့ ပီရကျဇျက သူသဘောကတြဲ့ ဒီဂီယာကို ချေါယူဖို့ ဇီဒနျးကနျ့ကှကျခဲ့တဲ့အတှကျ တုံ့ပွနျတဲ့အနနေဲ့ No လို့ ပွနျပွောခဲ့တယျ။ ဒီကိစ်စဟာ သူတို့နှဈယောကျကွားမှာ တျောတျောလေး တငျးမာမှုတှေ ဖွဈခဲ့ပွီး ဇီဒနျးဟာ ၂၀၁၇-၁၈ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို ရပွီးပွီးခငျြး ရကျပိုငျးအကွာမှာပဲ နညျးပွရာထူးက ရုတျတရကျနုတျထှကျသှားခဲ့တာကွောငျ့ ရီးယဲလျပရိသတျတှကေိုယျတိုငျ နားမလညျနိုငျအောငျ ဖွဈခဲ့ရတယျ။
ဇီဒနျးနဲ့ လမျးခှဲပွီး (၂)လလောကျအကွာမှာပဲ စီရျောနယျလျဒိုနဲ့ ရီးယဲလျအသငျးတို့ရဲ့ ကတ်တီပါလမျးခှဲက စခဲ့ပွနျတယျ။ အမှနျတော့ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ အနာဂတျသတငျးတှကေ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈတှကေတညျးက ထှကျနတောပါ။ ရီးယဲလျဟာ စီရျောနယျလျဒိုကို ၂၀၂၁ အထိ စာခြုပျသကျတမျးတိုးခဲ့ပမေယျ့ စီရျောနယျလျဒိုက နောကျထပျ စာခြုပျသကျတမျးတိုးလိုနပွေီး လစာလညျး ပိုလိုခငျြခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ သိတဲ့အတိုငျး ပီရကျဇျဆိုတာက စီးပှားရေးသမားလေ။ စီရျောနယျလျဒိုကို သကျတမျးတိုးမယျ့အစား လကျရှိကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးနရောကို တကျလှမျးဖို့ခွလှေမျးပွငျနတေဲ့ နမော၊ ဟာဇကျ၊ ဘာပတေို့ထဲက တဈဦးကို ချေါလိုကျမယျဆိုရငျ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့နရောကို အစားထိုးနိုငျမှာဖွဈသလို၊ ဈေးကှကျအရလညျး သိပျပွီးတော့ ထိခိုကျမယျ့အနအေထားမရှိဘူးလို့ တှကျဆမိပုံပါပဲ။
နောကျပွီး ပီရကျဇျက စီရျောနယျလျဒိုဟာ စာခြုပျသကျတမျးကုနျမှ အသငျးနဲ့လမျးခှဲမယျလို့ ယူဆမိတာလညျး ပါပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေဲ့ စီရျောနယျလျဒိုက အသငျးက ထှကျခှာခှငျ့ပေးဖို့ တောငျးဆိုခဲ့ခြိနျမှာ အလှယျတကူ ခှငျ့ပွုခဲ့တာကတော့ ကစားသမားကို မလေးစားရာရောကျတယျလို့ ထငျမိတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ စီရျောနယျလျဒိုလို တဈရာသီကို အနညျးဆုံးဂိုး(၄၀)လောကျသှငျးတဲ့ကစားသမားမြိုး၊ ဈေးကှကျအရ တနျဖိုးရှိနဆေဲကစားသမားမြိုး၊ ရီးယဲလျအသငျးအတှကျ မရှိမဖွဈကစားသမားမြိုးကို လှယျလှယျကူကူ လကျလှတျခဲ့တာက မှားယှငျးပါတယျ။ စီရျောနယျလျဒိုဟာ အသကျ(၃၃)နှဈအရှယျရှိနပွေီဆိုတာတော့ မှနျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူ့ခွစှေမျးက အကောငျးဆုံးအနအေထားမှာရှိနဆေဲပဲ။ ဒီလိုကစားသမားမြိုးကို ယူရိုသနျး(၁၀၀)လောကျနဲ့ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးဆီ ထုတျလိုကျတယျ၊ သူ့နရောကို ဘယျသူနဲ့ပွနျဖွညျ့မှာလဲဆိုတာ ပီရကျဇျ အဖွရှောမရသေးဘူး။
အခုအခြိနျမှာ နမောလိုလို၊ ဘာပလေိုလို၊ ဟာဇကျလိုလိုဖွဈနပေမေယျ့ ဘယျသူ့မှ မသခြောသေးဘူး။ တကယျလို့ အဲဒီ(၃)ဦးထဲက တဈဦးဦးကို ချေါယူနိုငျခဲ့ရငျလညျး စီရျောနယျလျဒိုလို စှမျးဆောငျရညျမြိုး ပွသနိုငျမလားဆိုတာ စဉျးစားစရာပဲ။ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးအတှကျတော့ စီရျောနယျလျဒိုကို ရလိုကျတာ ရှအေိုးရလိုကျသလိုပါ။ အခု ဂြူဗငျတပျဈအသငျးရဲ့ ရှယျယာဈေးကှကျတှေ မွငျ့တကျလာပွီ၊ စီရျောနယျလျဒို အကငြ်္ီတှရေောငျးခရြမှုကလညျး မွငျ့တကျနပွေီ။ ဒီအခြိနျမှာ စီရျောနယျလျဒိုကို ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ ရီးယဲလျအသငျး အဲဒီ Effect တှကေို စတငျခံစားနရေတယျ။
စပိနျသတငျးစာတှရေဲ့ဖျောပွမှုအရ ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ ရှယျယာတှကေ ကဆြငျးနပွေီလို့ သိရတယျ။ ဒါက ဈေးကှကျတဈခုတညျးပါ၊ ကှငျးတှငျးစှမျးဆောငျရညျမှာလညျး အနညျးနဲ့အမြားထိခိုကျဖို့ရှိလာနိုငျတယျ။ ရီးယဲလျအသငျးဟာ လာမယျ့ရာသီကို ဇီဒနျးမရှိ၊ စီရျောနယျလျဒိုမရှိတဲ့ အခွအေနနေဲ့ စတငျရမယျ၊ လကျရှိခနျ့ထားတဲ့ နညျးပွလိုပယျတကျဂီ ကရော ဇီဒနျးလိုမြိုး အောငျမွငျမှုတှေ ရယူနိုငျမလား၊ ဇီဒနျးတုနျးက အသငျးရဲ့ကံကွမ်မာကို အလောငျးစားလုပျခဲ့တဲ့ ပီရကျဇျ ဒီတဈခါရော အဲဒီလို ကံကောငျးမှုမြိုး ထပျရဦးမလား။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ လကျရှိရီးယဲလျအသငျးရဲ့အနအေထားက အရငျတုနျးကလောကျ အားရဖို့မကောငျးတော့တာ အမှနျပါပဲ။ ပီရကျဇျရဲ့ အတ်တမာနတှကွေားမှာ ရီးယဲလျအသငျးက စတေးခံဖွဈရတော့မှာလား ဆိုတာတော့ . . . .